Filimku wuxuu la kulmay plywood
Plywood caaga ah
OSB (Guddiga Jihaynta Jihada)
HPL Guddi Dabka Ka Difaaca
Adeegga Dhoofinta iyo Dhoofinta
Ku saabsan filimku wuxuu wajahay plywood
Waxyaabaha ceyriinka ah ee loo isticmaalay filimka dhismaha-dhamaadka sare ee loo yaqaan 'plywood' waa bjchrk oo leh cufnaan dhan 700KG / M3. Sababtoo ah maadada bjchrk way adag tahay, filimku wuxuu wajahay plywood e laga sameeyay bjchrk waa mid aad u siman oo leh awood culeys qaad ah. Ma jiri doono foorarsho cadaadis sarreeya. Intaa waxaa dheer, duufaanta ...
Waa maxay plywood
Plywood waa nooc ka mid ah loox alwaax dad samee ah oo dib loogu soo ururiyo diirka. Plywood waxaa lagu sameeyaa iyadoo loo jaro veneers-ka ballaaran ee jihada sanadlaha. Ka dib markii la qalajiyo oo la isku xiro, waxaa loo soo saaraa iyadoo loo eegayo halbeegga jihada hadhuudhka mahogany ee jihada dhow Kabuubyada ...
Plywood Marine - plywood aan biyuhu lahayn
ROCPLEX plywood-ka badda waa mid ka mid ah qalabka alwaaxda ee sida caadiga ah loo isticmaalo soo saarista alaab guri oo aan biyuhu ka soo bixi karin iyo qoyaan-celin iyo qurxin. Waxay hagaajin kartaa heerka isticmaalka alwaax waana dariiqa ugu weyn ee lagu badbaadiyo qoryaha. ROCPLEX plywood-ka badda ayaa lagu dabaqi karaa yaashiyo, warshadaha Shipbuilding m ...
Saxeex wargeyskeena si aad ula socoto cusbooneysiintayada, qiimo dhimista, iibka, iyo dalabyada gaarka ah
Wax soo saarka adduunka
Cinwaanka: Xarunta Senso, Pizhou City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
Isniin - Jimco: 10 subaxnimo - 7galabnimo
Ku saabsan ROC